bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com Monstrous – Gold Channel Movies
Apr. 29, 2022 TVING
Episode4Apr. 29, 2022
Episode6Apr. 29, 2022
သဲထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကို လွမ်းနေကြတဲ့ GCverses လေးတို့အတွက် ဒီတစ်ခါမှာတော့ Monstrous ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာဆိုရင် သဘာဝလွန် ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ ရုပ်တုတစ်ခုနဲ့ ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များကို တစ်စစီဆွဲထုတ် အဖြေရှာကြမှာကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျောင်ဂီဟွန်း (Koo Kyo Hwan)ဟာ ထူးခြားဖြစ်စဥ်များကို စူးစမ်းနေတဲ့ ရုပ်ကြွင်းလေ့လာရေး ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ဘဝဟာ တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ Monthly Strange Story အမည်ရှိ ဂမ္ဘီရမဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေပြီး ၎င်းအမည်နဲ့ပဲ Youtube channel တစ်ခုကိုလည်း ကိုင်တွယ်နေသူပါ။ ဇနီးဟောင်းဖြစ်သူ အီဆူဂျင်းကြောင့် ဂျင်ယန်းစီရင်စုကို သွားရောက်ပြီး ဂွီဘူလ်ဟု အမည်ရသော မကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်ပြုစားခံထားရတဲ့ ရုပ်တုကို လေ့လာခဲ့ပါလေတယ်။
ထိုနေရာမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် ထူးခြားဆန်းကြယ်ပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်အတိဖြစ်သော အဖြစ်အပျက်များကို ရင်ဆိုင်ရပါလေတော့တယ်။ အီဆူဂျင်း (Shin Hyun Bin)ဟာလည်း ရုပ်ကြွင်းတွေကနေ ဝှက်စာ သင်္ကေတတွေ ပြန်လည်ဖော်ဆောင်သူ ဉာဏ်ကြီးရှင် ရုပ်ကြွင်းလေ့လာရေးပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသောရင်သွေးလေးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးနောက်မှာတော့ ဂျင်ယန်းစီရင်စုကို ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။
ဒါ့အပြင် ဂျင်ယန်းစီရင်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ မြို့တော်ဝန် ဂွန်ဂျုံးဆူ (Park Ho San)၊ စခန်းမှူး ဟန်ဆော့ဟွီ (Kim Ji Young) နဲ့ သားဖြစ်သူ ဟန်ဒိုဂယောင်း (Nam Da Reum)တို့နဲ့ အမွှေစိန်လေး ဂွက်ယုံးဂျူ (Gwak Dong Yeon) တို့ဟာလည်း ဂမ္ဘီရ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်နဲ့ ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာနဲ့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်မှာ ပါဝင်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျောင်ဂီဟွန်း၊ အီဆူဂျင်းတို့နှင့်တကွ လူတစ်စုတို့ဟာ ဂျင်ယန်းစီရင်စုအတွင်းက ထူးဆန်းထွေလာဖြစ်ရပ်များကို ဘယ်လိုအဖြေရှာကြမလဲဆိုတာကို သဲဲထိတ်ရင်ဖို စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Train to Busan နဲ့ Peninsula ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဒါရိုက်တာ Yeon Sang Ho နဲ့ စာရေးဆရာ Ryu Yong Jae တို့ ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ ရှုထောင့်သစ် Thriller ဇာတ်လမ်းတွဲ TVING’s original series Monstrous ကို Gold channel မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်လို့ GC team နဲ့ အတူ ခံစားကြည့်ရှူလိုက်ရအောင်နော်။
Original title 괴이
moe zMay 4, 2022Reply